2 Beresosɛm 30 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
2 Beresosɛm 30:1-27
30 Ɛnna Hesekia soma kɔɔ Israel+ ne Yuda nyinaa, na ɔkyerɛw nkrataa nso kɔmaa Efraim+ ne Manase+ sɛ wɔmmra Yehowa fie+ wɔ Yerusalem mmedi twam+ mma Yehowa, Israel Nyankopɔn. 2 Nanso ɔhene ne ne mpanyimfo+ ne Yerusalem bagua+ no nyinaa bɔɔ wɔn tirim sɛ wobedi twam no ɔsram a ɛto so abien+ no mu, 3 efisɛ wɔantumi anni no bere no mu;+ ná asɔfo+ a wɔadwira wɔn ho no nnɔɔso, afei nso na ɔman no mmoaboaa wɔn ano wɔ Yerusalem. 4 Asɛm no sɔɔ ɔhene ne bagua no nyinaa ani.+ 5 Enti wɔkae sɛ wɔnka+ wɔ Israel nyinaa, efi Beer-Seba+ kosi Dan,+ sɛ wɔmmra mmedi twam no mma Yehowa, Israel Nyankopɔn, wɔ Yerusalem. Ná nnipadɔm saa mmɔɔ mu nnii+ no sɛnea wɔakyerɛw no.+ 6 Na ammirikatufo+ no de nkrataa a efi ɔhene ne ne mpanyimfo+ nsam no kɔɔ Israel ne Yuda nyinaa, sɛnea ɔhene hyɛe no, sɛ: “Israelfo, monsan+ mmra Yehowa, Abraham ne Isak ne Israel Nyankopɔn+ nkyɛn, na ɔno nso nsan mmra wɔn a wɔafi Asiria ahene+ nsam aka+ ama mo no nkyɛn. 7 Monnyɛ sɛ mo agyanom+ ne mo nuanom a wɔanni Yehowa, mo agyanom Nyankopɔn nokware ma ɔde wɔn yɛɛ ahodwiriwde+ sɛnea muhu yi no. 8 Enti munnsinsen mo kɔn+ sɛnea mo agyanom yɛe no. Mommrɛ mo ho ase mma Yehowa+ na mommra ne kronkronbea+ a watew ho+ de rekosi daa no mu, na monsom+ Yehowa, mo Nyankopɔn, na n’abufuhyew+ afi mo so. 9 Sɛ mosan+ ba Yehowa nkyɛn a, mo nuanom ne mo mma benya mmɔborɔhunu,+ wɔn a wɔafa wɔn nnommum no nsam, na wɔbɛma wɔasan aba asase yi so,+ efisɛ Yehowa, mo Nyankopɔn no yɛ ɔdomfo+ ne mmɔborɔhunufo,+ na mosan ba ne nkyɛn a, ɔrenyi n’ani mfi mo so.”+ 10 Na ammirikatufo+ no kyinkyin nkurow nkurow mu, Efraim+ ne Manase asase nyinaa so de kosii Sebulon, nanso nkurɔfo sereserew wɔn, na wodii wɔn ho fɛw.+ 11 Nnipa mmiako mmiako bi+ a wofi Aser ne Manase ne Sebulon na wɔbrɛɛ wɔn ho ase+ baa Yerusalem. 12 Yuda de, nokware Nyankopɔn nsa baa wɔn so ma wonyaa koma koro+ de dii Yehowa asɛm a ɔhene ne ne mpanyimfo hyɛe+ no so.+ 13 Na nnipa pii boaa wɔn ano wɔ Yerusalem+ sɛ wɔrebedi paanoo a mmɔkaw nnim afahyɛ+ no, ɔsram a ɛto so abien+ no mu; ná wɔyɛ asafo kɛse. 14 Ɛnna wɔsɔree, na woyiyii afɔremuka+ a ɛwɔ Yerusalem ne aduhuamhyew afɔremuka+ no nyinaa, na wɔkɔtow guu Kidron subon+ no mu. 15 Ɛno akyi no, wokum twam+ guan no ɔsram a ɛto so abien no da a ɛto so dunan; asɔfo ne Lewifo no ani wui, na wodwiraa+ wɔn ho, na wɔde ɔhyew afɔre baa Yehowa fie hɔ. 16 Wogyinagyinaa+ wɔn gyinabea sɛnea wɔahyɛ ne sɛnea Onyankopɔn nipa Mose mmara no te, na asɔfo+ no gyee mogya no Lewifo no nsam de petee. 17 Ná nnipa bebree wɔ bagua no mu a wɔnyɛɛ wɔn ho kronkron, na Lewifo+ no na wɔde hyɛɛ wɔn nsa sɛ wonkunkum twam nguan+ no mma wɔn a wɔn ho ntew no mfa nnwira wɔn ho mma Yehowa. 18 Saa bere no nnipa pii a wonnwiraa+ wɔn ho dii twam no, nanso ɛnyɛ sɛnea wɔakyerɛw no;+ ná wɔn mu bebree fi Efraim+ ne Manase+ ne Isakar ne Sebulon.+ Nanso Hesekia bɔɔ mpae maa wɔn+ sɛ: “Yehowa a oye+ no mfa nkyɛ 19 obiara a wasiesie ne koma+ sɛ ɔrehwehwɛ nokware Nyankopɔn Yehowa, n’agyanom Nyankopɔn no; sɛ ɔntew ne ho mmaa akronkronne mpo a ɔmfa nkyɛ no.”+ 20 Na Yehowa tiee Hesekia, na ɔsaa nnipa no yare.+ 21 Na Israelfo a wɔbaa Yerusalem no de ahurusi kɛse+ dii paanoo a mmɔkaw nnim afahyɛ+ no nnanson, na Lewifo+ ne asɔfo+ no bɔɔ dwom denneennen maa Yehowa da biara de yii Yehowa ayɛ.+ 22 Bio nso Hesekia ne Lewifo a wɔde adwempa resom Yehowa+ no nyinaa kasae akomatɔyam+ so. Wodii afahyɛ no nnanson,+ na wɔbɔɔ asomdwoe afɔre,+ na wɔkaa wɔn bɔne+ kyerɛɛ Yehowa, wɔn agyanom Nyankopɔn no. 23 Ɛnna bagua no nyinaa yɛɛ adwene+ sɛ wɔde nnanson bɛka ho,+ na wɔde ahurusi dii no nnanson bio. 24 Na Yuda hene Hesekia de afɔrebɔde maa+ bagua no; ɔde anantwinini apem ne nguan mpemnson maa bagua no, na mpanyimfo+ no nso de anantwinini apem ne nguan mpem du. Na asɔfo+ no pii dwiraa wɔn ho. 25 Nnipa a wofi Yuda+ nyinaa, ne asɔfo ne Lewifo+ no, ne nnipa a wofi Israel bae+ nyinaa, ne ahɔho+ a wofi Israel asase so bae+ ne wɔn a wɔtete Yuda no dii ahurusi.+ 26 Ahurusidi kɛse baa Yerusalem; efi Dawid ba, Israel hene Solomon bere so,+ ebi mmaa Yerusalem saa da.+ 27 Ɛnna Lewifo, asɔfo no sɔree, na wohyiraa+ nnipa no; Onyankopɔn tiee wɔn, ma enti wɔn mpaebɔ no duu ne tenabea kronkron hɔ wɔ soro.+
2 Beresosɛm 30